यी हुन् बिरामीसंग अबैध असुली गर्न पल्किएका राजधानीका ६ महंगा अस्पताल – Nepali Health
यी हुन् बिरामीसंग अबैध असुली गर्न पल्किएका राजधानीका ६ महंगा अस्पताल
२०७४ मंसिर २८ गते १९:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २८ मंसिर । सरकारले विरामीसंग स्वास्थ्य ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिन छुट दिएको छ । विरामीसंग कर असुल्ने सरकारले ल्याएको सो नियमको आम सर्वसाधारणले शुरु देखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
तर राजधानीका नाम चलेका केही महंगा निजी अस्पताललेभने सरकारले ल्याएको सो कर बाहेक अन्य शीर्षकमा कर राखेर विरामीसंग अवैध असुलि गर्दै आएको भेटिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागकाले हालै गरेको एक अनुगमनले केही अस्पतालका अवैध असुलीको छरप्रष्ट पारिदिएको छ ।
बिरामीलाई कसरी सेक्दा रहेछन निजी अस्पताल ?
नर्भिक अस्पताल थापाथलि :
राजधानीमा नाम चलेको ठूलो निजी अस्पतालमा गनिन्छ थापाथलिस्थित नर्भिक अस्पताल । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक महिना अघि गरेको अनुगमनमा सो अस्पतालमा विरामीसंग ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १३ प्रतिश भ्याट लिने गरेको पाइयो ।
‘त्यसरी थप १३ प्रतिशत लिने भनेको अवैध अशुली हो,’ विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भने । उनले नर्भिकले विपन्न नागरिकका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत बेड समेत नछुट्याएको पाइएको जानकारी दिए ।
बीएण्डबी अस्पताल ग्वार्को :
विभागकै अनुगमन टोली केही दिन अघि राजधानीको अर्को नाम चलेको निजी अस्पताल बीएण्डबीमा पनि पुगेको थियो । अनुगमनमा क्रममा बीएण्डबीले पनि ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज भनेर लिने गरेको भेटियो ।
उसले हरेक शीर्षकमा थप १० प्रतिशतका दरले नर्सिङ चार्ज लिने गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए । १०० बेडको स्वीकृति लिएपनि उसले १२५ बेड सञ्चालन गरेको बताए । उनले कुल बेडको १० प्रतिशत विपन्न बेड राख्नुपर्ने भएपनि विएण्डबीले एउटा बेड विपन्नका लागि छुट्याएको पाइएको जानकारी दिए ।
‘उपचारका क्रममा लाखौँ रुपैया खर्च भएका विरामीलाई अनावश्यक चार्ज थपि अवैध असुली गर्ने लाइनमा विएण्ड वि पनि अगाडी नै रहेछ,’ दाहालले भने ।
ग्राण्डी हस्पिटल धापासी :
अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भन्दै प्रचारमा आएको ग्राण्डी अस्पताल यसै पनि महंगो अस्पतालमा गनिन्छ । सो अस्पतालले विरामीसंग ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनेनै भयो ।
त्यसबाहेक हरेक आइटममा १० प्रतिशतका दरले नर्सिङ चार्जको रुपमा अवैध असुली गरिरहेको छ । बिरामीले दान दिएको रगतमा समेत अवैध असुली गर्दा सो अस्पताललाई केही बर्ष अघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्तको एक निकायले पत्र काटेको थियो ।
‘बेड देखि व्लड जाँच गर्दा सम्म १० प्रतिशत चार्ज लिदो रहेछ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । ग्राण्डीमा पनि विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याएको छैन ।
बयोधा हस्पिटल बल्खु :
बिरामीको ढाड सेक्ने गरी असुली गर्ने अर्को निजी अस्पताल हो बल्खुस्थित बयोधा हस्पिटल । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा दिएको बताउने बयोधाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर होइन १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लिने गरेको छ ।
त्यसबाहेक थप १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज भनेर कर लिने गरेको छ । यसले विरामीसंग २३ प्रतिशत कर लिँदो रहेछ । महानिर्देशक दाहालले भने, तर विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड भने छुट्याएको छैन ।
न्युरो अस्पताल बाँसबारी :
चर्चित डा. उपेन्द्र देवकोटाले सञ्चालन गरेको अस्पताल हो बाँसबारीमा रहेको न्युरो अस्पताल । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र हाल चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका सदस्य रहेका डा देवकोटा यसैबर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्तित्वमा समेत सम्मानित भएका व्यक्ति हुन् ।
तर उनैले सञ्चालन गरेको अस्पतालले विरामीसंग अवैध असुली गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘न्युरो अस्पतालले पनि ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप १० प्रतिशत नर्सिङ चार्ज भनेर लिएको भेटियो । जो अवैध हो ।’ उनले तर देवकोटाको अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याएको पाइएको जानकारी दिए । ‘अरुमा भन्दा फरक त्यहाँ विपन्नका लागि बेड छुट्याएको देखियो । जो सकारात्मक हो,’ दाहालले भने ।
इशान हस्पिटल बसुन्धरा :
कान्ति अस्पतालका डाक्टरहरुले खोलेको र आउने विरामीहरुलाई उतै रिफर गर्ने तथा अवैध असुली गर्ने भन्ने उजुरी परेपछि विभागको टोलीले आजै बसुन्धरास्थित इशान हस्पिटलको समेत निरीक्षण गरेको थियो ।
सो क्रममा हस्पिटलले विरामी कुरुवासंग अघोशित रुपमा ४०० रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक थप कर लिएको भने नपाएको जानकारी दिए । यद्धपी इशानले पनि १० प्रतिशत विपन्नका लागि बेड भने छुट्याएको नदेखिएको उनले बताए ।
विरामीसंग अवैध असुली गरेका खबर सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यसबाहेक उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘बुधबार देखि हामीले यी अस्पतालहरुलाई तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेका छौँ । त्यसपछि हामी अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ दाहालले भने ।
दुई सचिवको व्यवस्थापन यसरी गर्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी
सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा राखिने चेतावनीमुलक चित्रको प्रभाव यस्तो छ
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ५५ प्रतिशत फेल
‘मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन निर्देशिका’ अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति
३५ प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने, ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना हुने
पुरानो मेडिकल कलेजद्धारा ट्राफिक प्रहरीलाई ब्रेथलाइजर मेसिन सहयोग
‘न्युट्रासिटिकल्स प्रडक्ट’ चिकित्सकले ‘प्रेस्काइब’ गर्न मिल्छ ?
आफैले लेखेको ‘आक्रामक राजिनामा पत्र’ आफैद्धारा खण्डन
बच्चालाई मोबाइल हेर्ने लतबाट कसरी छुटाउने ?